ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/12/12
ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကနီမြို့နယ်၊ ဘောက်အင်းတောင်တောကျေးရွာမှာ ရေအလှူသွားပေးသူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရ (ရုပ်သံ)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:32 PM No comments:
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ကြေးနီစီမံကိန်းက သိမ်းယူထားတဲ့ လယ်မြေပြန်ရရေးအတွက် မုံရွာခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်က လယ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ (ရုပ်သံ)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:28 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:23 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အဓိကရုဏ်းတွင် အမေရိကန်၏ သဘောထားတုံပြန်ချက်
ရခိုင်ပြည် ပြာပုံဖြစ်တဲ့ အထိ မစောင့်ကြပါနဲ့ 
Kyaw H . Aung
ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်သမားတွေကို တားဆီးဖို့၊ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဆုံးရှုံးမှုများကို ရပ်တန့်ဖို့ ရှယ်ပေးကြပါအုံး ခင်ဗျာ။ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြပါ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:05 PM No comments:
(ဇွန် ၁၀ ၂၀၁၂)
★ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ★ရဲ့ မိန့် ခွန်း
"ကိုယ့်အမျိုးကို ချစ်ရုံနဲ့ ဒီ့ပြင် အမျိုးကိုလည်း မုန်းဖို့မလိုဘူး။
သို့သော်လည်း အမျိုးအကျိုးကို လာထိတဲ့သူတွေကိုတော့
အတွင်းကလူဖြစ်ဖြစ် အပြင်ကလူဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းရမှာပေါ့။
ဒါက ငါတို့ အမျိုးရဲ့ ရန်သူအဖြစ်ဖြင့်သာ နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်တယ်။
ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုပြီး နှိမ်နှင်းတာမဟုတ်ဘူး"
၁၉၄၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ မင်္ဂလာဒုံ ဗိုလ်သင်တန်း ကျောင်းဆင်းပွဲ မိန့်ခွန်းမှ —
ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပြသနာများကို ဘယ်တုန်းကမှ ဆွေးနွေးလိုစိတ် မရှိခဲဘူး ။ ပိုဆိုးတာက ခုဖြစ်နေတဲ့ပြသနာတွေကိုလည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူး ကြုံရင် အစိုးရကို ဝေဖန်ဖို့လောက်ပဲ ရေးနေတယ်လို့ ယူဆစရာရှိလို့ မပြောဖြစ်အောင် နေတယ် ။ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဖြစ်လာလို့ ပြောခြင်ရာပြောတော့မယ် ။ ရိုင်းဆိုင်းစွာ ဆဲဆိုလာတဲ့ အကောင့်တွေကိုလည်း ဘလော့သွားမယ် ။ မကျေနပ်လို့ ဘလော့ချင်တဲ့ သူများလဲ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ဘလော့သွားကြပါ ။
ပထမဆုံး အချက်က - ပင်တဂွန်က စစ်ရေးပူတွဲလေ့ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုး အရိပ်အမွတ်ထွက်လာကတည်းက ပြသနာလေးတွေ အကျယ်အကျယ် ဖန်တီးလာတာရှိတယ် ။ မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ယူအက်စ်နဲ့ ပူတွဲလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် ချိုင်နားကို ပြဖို့အတွက် reason ကောင်းကောင်းတစ်ခု မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ် ။ ဒီမှာတင်ပဲ ရိုဟင်ဂျားအရေးမှာ အယ်ကိုင်းဒါတွေ ဆွဲသွင်းလာပြီး အထိကရုဏ်းက ပိုပိုကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ဖြစ်လာတာပဲ ။
ဒုတိယအချက်က - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ် ။ အမေရိကန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆက်ဆံရေး အနည်းငယ်တင်းမာနေတယ် ဆိုတာ မဝေဖန်သင့်တဲ့ အချိန်မို့ မပြောပဲ ဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီကိစ္စအတွက် နောက်များ အကြောင်းကြုံမှ ဆွေးနွေးပါဦးမယ် ။ ဆန်ရှင်ကိစ္စအတွက် ဒေါ်စုအထပ်ထပ်အခါခါ သတိပေးနေရက်နဲ့ ဒေါ်ကလင်တန် မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ဆန်ရှင်ဖွင့်ပေးခဲ့တယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ယိုးဒယာခရီးစဉ်မှာ မြန်မာဟာ "တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ တိုက်ပွဲနေရာမဟုတ်ဘူးလို့ "ပေါ်တင်ပဲ ချဲလင်းခေါ်ခဲ့တယ် ။ ဆန်ရှင်ကိစ္စကို တရားဝင်ထုတ်ပြောတော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်ဖြစ်သွားကြတာ ဟန်တောင်မဆောင်နိုင်တော့အောင်ပဲ ။ နောက် ဥရောပကို ခရီးစဉ် ဆက်ထွက်မယ် ။ ဒီကိစ္စကို ယူရိုထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ အစိုးရအနေနဲ့ ယုံမှားစရာမရှိဘူး ။ ဒေါ်စုကို ချန်လှပ်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ ဇာတ်ပေါင်းခန်းရိုက်မယ့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်ကို မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်ဖို့အတွက် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါနဲ့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားလိုက်ကြတာ ဖယောင်းတိုင်ပြသနာမှာ ဦးကိုကိုလှိုင်လို နိုင်ငံတော် လူလည်ကြီးကတောင် လူတုံးစကားပြောပြီး ဒေါသမီးကို အစမွှေးပေးခဲ့သေးတယ် ။ မအောင်မြင်တော့ နောက်တဆင့်တက်လိုက်ပြီး ရခိုင်အရေးမှာ ကျော်ဆန်းက မွတ်စလင်ကုလားလို့သုံးပြီး လူမျိုးရေးကို ဇောင်းပေး ထပ်ဆင့်ကူညီခဲ့တယ် ။ သမ္မတရုံးကလူက ဖဘမှာ သွေးဆူစရာပုံတွေတင်ပြီး သတင်းမှားတွေ ဆက်တိုင်လွှင့်တယ် ။ အယ်လ်ကေဒါနဲ့ ဆက်နွှယ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ စစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေ လူအင်အားဘယ်လောက်ဘယ်လောက်နဲ့ လက်နက်ကိုင် ဘင်င်္ဂါလီတွေ လာနေကြပြီဆိုတဲ့ သတင်းမျိုးတွေ ကို တာဝန်ယူစိတ်ကင်းမဲ့စွာ လှုံဆော်ရေးသားနေတယ်။ ဒီလောက် မီဒီယာအားကောင်းနေတဲ့ ဖဘမှာ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှ တက်မလာဘူးး ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်က ပြည်သူ့အခက် စစ်တပ်အချက်ဆိုသလိုပဲ တစ်ချိန်မှာ ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တဲ့ ကာလုံမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ ပြည်သူ့အချစ်ကို ပြန်ရဖို့ ဟန်ရေးဝင်ပြနေတယ် ။ လက်နက်ကိုင် လူအင်အား၂၀၀ ကျော်လောက်ရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို တပ်အင်အား ၆ထောင်လောက်ရှိတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က လေတပ် အကူအညီယူလိုက် ရေတပ်အကူအညီယူလိုက် လုပ်ပြပြီး ထိထိရောက်ရောက် မနှိမ်နင်းပြသေးဘူး ။ မြို့ထဲမှာ လူတွေသေနေရတယ် အိုးအိမ်တွေ စွန့်ခွာပြီး ထွက်ပြေတိမ်းရှောင်နေရတာ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ အတိုင်းပဲ ။ အခြေအနေတွေက တစ်နေ့တခြား ပိုပို ဆိုးဝါလာတယ် ။ စက်တင်ဘာမှာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေအောင် သံဃာပါမချန် ကျောင်းသားအဆုံး ပစ်ခတ်ဖမ်းစီးပြီး ရက်ရက်စက်စက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ အပစ်အခတ်ဟာ ရခိုင်မှာတော့ နှာဆေးနေသလား အိပ်ငိုက်နေသလားလို့တောင် ထင်မှတ်ရတယ် ။
ဒါဟာ တစ်ဖက်သတ် သံသယကြီးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဦးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီး စတတ်တဲ့အချိန်လောက် တပ်မတော်အပေါ် ပြည်သူချစ်တဲ့ အချိန်ဟာ မရှိခဲ့သေးဘူး ။ ရောင်စုံသူပုန်တွေကို အပြီးသတ်နှိမ်နှင်းပြပြီး ပြည်သူဘက်က မားမားရပ်ပြခဲ့တာကိုး ။ မေးစရာရှိတာက ပြည်တွင်းမှာ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ စစ်မီးတွေ ဒီလောက် တောက်လောင်နေတဲ့အချိန်မှာ တပ်မတော်က ဘယ်ဆီမှာများ အိပ်စက်နေပါလဲလို့ ။ နောက်ဆုံး ပြည်တွင်းအတိုက်အခံ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေ မင်းဓမ္မကုန်းထိ အောင်မြင်စွာ သိမ်းပိုက်လာနိုင်မှ အာဏာထသိမ်းပြီး တပ်မတော်ဝင်လာပြီဆိုကြေငြာ အပြတ်တိုက်ထုတ်လိုက်တာ အကုန်ပြောင်ရှင်းသွားတာပဲ ။ အဲ့လိုမျိုး အလားသဏ္ဍန်မျိုးတွေ ခုချိန်မှာ ထပ်မံပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူ့အသည်းစွဲဖြစ်အောင် ကြံစည်နေကြတုန်းပဲ ။ တပ်မတော်ကို ပြည်သူယုံကြည်တာ ၊ လေးစားတာ ၊ ချစ်မြတ်နိုးတာဟာ နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက် မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုဆိုတာာ အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံတယ် ။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော်ကို ပြည်သူက ချစ်ဖို့အတွက်နဲ့တော့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူအပေါင်းရဲ့ အသက်တွေ စတေးပေးစရာမလိုပါဘူး ။ ရိုးရိုးသားသားတာ ပြည်သူတွေဖက်က ရပ်တည်ချင်တယ်ဆိုရင် ရခိုင်အရေးမှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းသိမ်းလို့ရပါတယ် ။ ကျူးကျော်သူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူလို့ရတယ် ။ လူ့အခွင့်အရေးဗန်းပြနေတဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်စရာမရှိပါဘူး ။ အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်တွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်ခံပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမှသာလျှင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုရင် ပထမဆုံးသက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်က ကျူးဘားနဲ့ မက္ကစီကိုလူမျိုးတွေကို ဘာအဟန့်အတားမှ မပြုလုပ်ပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အရင်ပေးရပါလိမ့်မယ် ။ ထားပါ ဒါက ပြင်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ သဘောထားပါ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပြသနာက ကျနော်တို့နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ် ။ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးရမှာက မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ အလုပ်ပဲ ။ ပြသနာကို မီးစမွှေး အကျယ်အကျယ်ချဲ့ ထိန်းမနိုင်သိမ်းရ ဖြစ်လာမှ အမည်ကောင်းဝင်ယူပြီး မောင်းဖြုတ်ချတတ်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေကတော့ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်နေပါပြီ ။
ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့တာဝန်ပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သိတိလေးနဲ့ ဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ် ။ လက်နက်နဲ့ ကာကွယ်တာကတော့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ တပ်မတော်နဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အမုန်းတွေ နာကျည်းချက်တွေနဲ့ ဂလဲ့စားခြေ ပြန်လည်လက်တုန့်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ ပဌိပက္ခတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ပြေလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အာဖရိက ၊ ဘော့စနီးယား ၊ ဂျော်ဂျီယာ ဆူဒန်က ဒါဖာအရေးတွေကိုပဲ ချိန်ထိုးပြီး သတိလေးချပ်ကြပါ ။ လူမျိုးသုန်း သတ်ဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်သူမှ အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဘယ်လူမျိုးမှလည်း သုန်းသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ပြသနာကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ တုန့်ပြန်မှု မှန်ကန်မှသာ အောင်မြင်မှု့ရနိုင်တာမျိုးမို့ ဒေါသမီးကိုခဏခွာပြီး အရှိအတိုင်မြင်အောင်ကြည့်လို့ အန္တရာယ်ကို တားဆီးကြပါစို့ ။
(( ကျနော်လည်း နာကျင်ရပါတယ် ၊ ခံစားရပါတယ် ၊ လက်တုန့်ပြန်ချင်စိတ်လေးတွေပေါ်မိပါတယ်ဆိုတာတော့ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံပါတယ် ။ လူမှန်ရင်တော့ ကိုယ်အမျိုး ကိုယ်ချစ်တဲ့ အစွဲကတော့ ရှိကြတာပါပဲ ။ ဘာအစွဲ ညာအစွဲ လူမျိုးစွဲမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာ မုသားသက်သက်ပါပဲ ။ ပုထုဇဉ်ပီပီတော့ အစွဲလေးတော့ရှိကြမှာပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဒဘာသာပီပီ ပညာ ရယ် ဥာဏ် ရယ်ကို သတိလေးကပ်ပြီး ဆင်ခြင်ကြပါဆို့ တုန့်ပြန်ကြပါစို့ )))
http://www.facebook.com/pages/Messenger-News-Journal/127099574018030 မှာ တွေ့ရတဲ့ ကြေညာချက်ပါ။
၁။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၉ စာမျက်နှာ ၈ တွင် မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသုံးဦးမှ အဓမ္မပြုကျင့်၍ အသတ်
ခံခဲ့ရပြီး မသီတာထွေး အသက် ၂၇ နှစ် (ဘ) ဦးလှတင်၏အခင်းဖြစ်သည့်နေရာတွင် သေဆုံးနေသည့် ဓာတ်ပုံအား မျက်နှာဝါးထားပြီး အရွယ်အစား အလျား ၇ လက်မ x အနံ ၃ ဒသမ ၈၅ လက်မ ခန့်ဖြင့် သတင်းနှင့် ယှဉ်တွဲလျက် ထည့်သွင်းဖော်ပြလာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၂။ စိစစ်ချက်များအရ အဆိုပါပုံမှာ စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနသို့ ကြိုတင် တင်ပြမှုမရှိဘဲထည့်သွင်းခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ထည့်သွင်းခြင်းမျိုးသည် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နှင့် မကိုက်ညီသည့် အပြင် လတ်တလော ဆူပူအုံကြွမှုများ ဖြစ်ပွားနေချိန်၌ ပုံနှိပ်ဖော်ပြရန် လုံးဝ မသင့်လျော်သည့် ပုံမျိုးဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။
၃။ သို့ပါ၍ စာပေစိစစ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနကချမှတ်ထားသော စာပေစိစစ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်အား ယနေ့မှစ၍ ထုတ် ဝေခွင့် ယာယီရပ် ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကြေငြာလိုက်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:28 AM No comments:
၀တီ ကြေးမုံ မှ ဓါတ်ပုံများ
ထပ်ဆင့်မျှဝေခြင်း = http://waddymirror.blogspot.ca/
ညီနောင်သားချင်း... ရခိုင်လူမျိုးများရဲ့ လူမှုဘ၀များကို
တင်ပြထားသော ရခိုင်လူမှုဘ၀ အင်တာနက်ပြခန်းကို
တကယ်ပဲ အဓမ္မကို ဓမ္မနဲ့ အစားမထိုးနိုင်ကြတော့ဘူးလား...
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:17 AM No comments:
ပေါက်တော ပစ်ခတ်မှု ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
ယင်းသို့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ချိန်တွင် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တားဆီးခဲ့သော်လည်း တား၍ မရခဲ့ပေ။ ၄င်းနောက် ၁၇၀၀ နာရီချိန်တွင် တပ်မတော်ကို အုပ်ချုပ်မှုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရာ ယင်းအုပ်စု (၂)စု အကြားတွင် တပ်မတော်မှ တံတိုင်းကာ၍ စည်းများ သတိပေးပြောကြားကာ တားမြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း နှစ်ဘက်စလုံးမှ နောက်မဆုတ်ဘဲ တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် မီးရှို့ထားသော ဓါတ်ဆီ ပုလင်းများ၊ ခဲများဖြင့် ပစ်ခတ်ကာ ဆက်တက်လာခဲ့သည်။ နှစ်ဘက်စလုံးအား တက်မလာဘဲ နောက်ဆုတ်ကြရန် ထပ်မဲ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း လက်မခံဘဲ တက်လာကြသဖြင့် တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ညွှန်း - သမ္မတရုံးအရာရှိတဦး၏ ဖေ့စ်ဘုတ် - http://www.facebook.com/hmuu.zaw
ရန်ကုန်နဲ့အနီးတ၀ိုက်မှာ တွေ့ရတဲ့သူတွေအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
The Life of the homeless in Rangoon
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:58 AM No comments:
ကျုပ် သတင်းစာသမားဘ၀က သတင်းစာတွေကို "ပြည်သူတို့၏ စကားပြန်" ရယ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပြည်သူအများ ခံစားနေရတာတွေ၊ ပြည်သူအများ လိုလားနေကြတာတွေ၊ ပြည်သူအများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာတွေကို သတင်းစာတွေက စကားပြန်ပေးနေကြတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါဟု ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
Hlaing Bwa https://www.facebook.com/hlaingb/posts/344523848952248?notif_t=like
လှိုင်ဘွား facebook account မှာ လာအက်ဒ်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ BBC သတင်းထောက်အားလုံး မိမိဖာသာ block လုပ်ပေးပါ ...
G W မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ..
ဒီမှာ http://2.bp.blogspot.com/-W-A2gSvGe00/T9X5tbdpc-I/AAAAAAAAHXw/R2Mti7EtIrY/s1600/00%2Bgw.jpg ဖတ်နိုင်ပါပြီ။
အဖွားအိုတစ်ဦး ရဲ့သောကမီး
Old women at Sittwe Refugee Camp.
ရခိုင်မှာ အကြမ်းဖက်တာ အမေရိက ကို အတုယူကြတဲ့ ခေတ်သစ်ကုလားများ
Rakhine State of Myanmar was attached by rohingya terrorists. Native Aranakese villages, in Rakhine State, Myanmar were burnt down by Bengali so-called Rohingya.
Any differences between Rohingya terrorist attacks in Rakhine State of Myanmar and 9/11 World Trade Center terrorist attack or 26/11 Mumbai Attacks....
After 9/ 11 American and alliances attack the terrorists all over the world for their national security. Moreover, american president, Barack Obama said, "We are not at war with Islam, We are at war with extremists who enage in destructive acts".
Now, in Rakhine state of Myanmar, we are protecting our own homeland from Rohingya terrorist attacks. It was notaspate of violence involving Buddhists and Muslims or not the religious clashes.
I am wondering why the world's famous medias are more concerned with Rohingya, the illegal immigrant terrorists. Why don't they concern native Arakan and national security of our homeland, Myanmar.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:17 AM No comments:
The Voice Weekly's
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ရှိ ရခိုင်များကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့်အစိုးရ လုံခြုံရေး ယူပေးထား
မိုးထိ-မိုးမိ ရွှေလုပ်သားများ နေပြည်တော်သို့ ချီတက် ဆန္ဒပြ
June 11, 2012 | Hits: 2,571
မိုးထိ-မိုးမိတောင် တနိုင်တပိုင် ရွှေတူးသမားများ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြန်ရရေး ဆန္ဒပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ခင်သြ / ဧရာဝတီ)
မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ်ရှိ မိုးထိ-မိုးမိတောင်မှ တနိုင်တပိုင် ရွှေတူးလုပ်သား ၂၀၀၀ ကျော်သည် တောင်းဆိုမှုများကို ကုမ္ပဏီက မလိုက်လျောသဖြင့် ရွှေတောမှ နေပြည်တော်သို့ ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီမှ စတင်၍ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မိုးထိ-မိုးမိတောင် ရွှေသတ္တုတူးဖော်ရေးကို နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိထားသည့်
အမျိုးသားကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီသို့ ရွှေတူးလုပ်သားများက လုပ်ငန်း ပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိရန်အတွက် အချက် ၆ ချက်ကို ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာတွင် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့အထိ တစုံတရာ အဖြေပေးခြင်း မရှိသည့်အတွက် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားကြီပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီရှိရာသို့ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မနက် ၁၀ နာရီကနေ မိုးထိ-မိုးမိဒေသဘက်ကို သွားနေတာ။ တောင်ပေါ်လမ်းတလျှာက်တော့ လူအင်အား ၂၀၀၀ ကျော်လောက်ပါတယ်။ နေပြည်တော်ဘက်အထိ ချီတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ” ဟု ချီတက်ဆန္ဒပြသည့်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူတဦးက ပြောသည်။
လမ်းလျှောက် ချီတက်ဆန္ဒပြသည့် လူ ၂၀၀၀ ကျော်တွင် ဆရာတော် ၁၁ ပါးက ရှေ့ဆုံးမှ ဦးဆောင် ချီတက်လာကြောင်း၊ မိုးထိ-မိုးမိဒေသတောင်ပေါ်တွင် သီတင်းသုံးနေသော ဆရာတော်များ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ ဦးဆောင်ကြောင်း သိရသည်။
“ဘုန်းကြီးတို့လည်း အလုပ်သမား ဒကာတွေရဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတာကို မကြည့်ရက်နိုင်လို့ ဒီလိုပါဝင်ခဲ့တာပါ။ ဘုန်းကြီးက မိုးထိ-မိုးမိဒေသရဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးပါ” ဟု ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသာက ဧရာဝတီသို့ မိန့်ကြားသည်။
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရမည်းသင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွှေလုပ်ကွက်မှ အလုပ်သမား ၅ သောင်းကျော်တို့သည် ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် အမျိုးသားကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီကို စတင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
“ဇုန် ၁၂ က အင်းလုပ်သားတွေ ဆနပြဖို့အတွက် ခြေကျင်လျှောက်သွားကြတယ်။ ကားနဲ့သွားဖို့ စီစဉ်ပေမယ့် ဂိတ် ၂ က ကားတက်ခွင့် မပြုလို့ ခြေကျင်သွားကြတာ။ မိုးတွေတအား ရွာနေတာကြောင့် လူ ၂၀၀၀ ကျော်လောက်ပဲ သွားနိုင်ကြတယ်” ဟု ၄င်းဒေသတွင် ဈေးရောင်းနေသူတဦးက ပြောသည်။
လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြနေသည့် အချိန်တွင် မိုးများရွာသွန်းနေခြင်း၊ တောင်အောက် ဆင်းရန် ကားစီစဉ်ရာတွင် လမ်းရှိ ကုမ္ပဏီပိုင် ဂိတ်များမှ ကားများကို တောင်ပေါ်တက်ခွင့် မပေးခြင်းတို့ကြောင့် လူအင်အား နည်းနေရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယင်းဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်သူတဦးကလည်း ပြောဆိုသည်။
မိုးထိ-မိုးမိဒေသနှင့် ရမည်းသင်းမြို့သည် မိုင်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ခန့် ဝေးသည်။ ဆန္ဒပြသူများသည် ယနေ့ညနေတွင် ရမည်းသင်းမြို့နယ်နှင့် ၇ မိုင်ခန့်ဝေးသည့် ရွှေမြင်တင်ဘုရားတွင် ညအိပ်နားခိုကြမည် ဖြစ်သည်။
နောက်တနေ့ နံနက်တွင် နေပြည်တော်သို့ လမ်းလျှောက်မည်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ ရုံးချုပ်ရှေ့သို့ သွားရောက် ဆန္ဒပြကြမည်ဟု သိရသည်။
ရမည်းသင်းမြို့မှ နေပြည်တော်သို့ မိုင် ၁၀၀ ကျော်ဝေးပြီး ထိုနေရာသို့ လမ်းလျှောက်သွားလျှင် မနားမနေ ၅ ညအိပ် သွားရမည်ဟု အလုပ်သမားတဦးက ပြောသည်။
ယင်းသို့ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြသည့်အချိန်တွင် အစိုးရဘက်မှ လက်ရှိအနေထားထိ တစုံတရာ ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ ထို့အပြင် မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့များကိုလည်း ရွှေလုပ်သားများက စားရေးသောက်ရေး အကူညီတောင်းထားကြောင်း သိရသည်။
“အခုချိန်ထိတော့ လူမှုကူညီရေးတွေဘက်က တစုံတရာ လာကူညီတာတော့ မရှိသေးဘူး။ အကူညီတော့ တောင်းထားတယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာ မိုးထိမိုးမိဒေသကို ဈေးလာရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည်တွေက ထမင်းတွေကျွေးကြ၊ ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့ ကြာဇံကြော်တွေ ကျွေးတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ လမ်းတလျှောက် စားဝတ်နေရေးကတော့ အခြေနေပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ရမှာပါ” ဟု ယင်းဆန္ဒပြပွဲတွင် လိုက်လံကူညီနေသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီရေး အကျိုးဆောင် ကွန်ယက်မှ ကိုသောင်းထိုက်က ပြောသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် လက်ရှိတွင် လူ ၂၀၀၀ ကျော်ဟု ဆိုသော်လည်း လမ်းတလျှောက်ရှိ ဒေသခံများနှင့် ပူးပေါင်းနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် တောင်ပေါ်မှ ထပ်ပြီးဆင်းလာမည့်သူများလည်း ရှိနေကြောင်း ကိုသောင်းထိုက်က ဆက်ပြောသည်။
လင်းသန့်| June 11, 2012 |
ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကြောင့် စစ...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အဓိကရုဏ်းတွင် အမေရိက...
အသားထဲကလောက်ထွက်သော ပြည်ပရှိ မြန်မာမီဒီယာများ ကျု...
ရခိုင်မှာ အကြမ်းဖက်တာ အမေရိက ကို အတုယူကြတဲ့ ခေတ်သ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ရှိ ရခိုင်များကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့်အ...
မိုးထိ-မိုးမိ ရွှေလုပ်သားများ နေပြည်တော်သို့ ချီတက်...
အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာချက် နိုင်ငံရေးသမားများ ထောက်ခ...